TopoCAD, in ka badan Topo, in ka badan CAD - Geofumadas
Ogast, 2009 ArcGIS-ESRI, GPS / Qalabka, Engineering, topografia
TopoCAD waa qaab asaasi ah, laakiin xal udub oo loogu talagalay topotography, sawir gacmeedka CAD iyo qaabeynta injineernimada; inkasta oo uu ka badan yahay taas oo ah horumar ah in uu qaaday in ka badan 15 sano ka dib dhalashada ee Sweden. Hadda waxaa la waraabiyaa aduunka, luuqadaha 12 iyo dalalka 70 inkastoo aysan u muuqan in ay gaareen qaybta sare ee suuqa.
TopoCAD waa sheyga xiddig ee shirkadda Qalabyada Chaos, kaas oo sidoo kale leh RhinoCeros, barnaamij loogu talagalay 3D, xoog leh laakiin aan wax badan la hadlin (waqtigan). Waxaa sidoo kale jira Chaos Desktop, maamulaha dokumentiga, wuxuu la mid yahay waxa ProjectWise uu sameeyo. Inkasta oo uu macquul yahay, isdhexgalka Microsoft Outlook iyo tas-hiilaadaha si loo helo dukumeentiyada iyo maadooyinka; ee alaabta TopoCAD ay leedahay aragti, halka qaabab sida dgn, dxf iyo dwg loo arki karo sawirro.
Fikradda xalinta fowdada, iyada oo loo marayo TopoCAD waa mid aad u xiiso badan, sababtoo ah magaca magaciisu yar yahay; Codsiyadu waxay ka koobanyihiin helitaanka xogta, saxitaanka iyo hagaajinta, sawirka CAD, isdhexgalka GIS, qaabaynta injineernimada iyo wareegga xidhitaanka suurtagalnimada in xogta loo diro kooxda baaritaanka.
Like kale oo kasta, line leeyahay version akhriste, la kala duwanaansho ah in incluírsele kartaa daray in ay dajiyaan iyo dhoofinta in billabo / DXF ama la macaamilaan sahan qaabab alaabtii. Inta soo hartay waa kala duwanaansho, waxay ku xiran karaan farshaxanka iyo naqshadeynta ama si madaxbannaan loo helo si ay u dhadhamaan, marka loo eego doorarka si cad loogu aasaasay qaabka:
Laga soo bilaabo barta miiska: Muuqaalka / CAD. Baakada la yiraahdo TopoCAD Base waxaa ka mid ah COGO, waxay ku xiran tahay qalabka sahanka, waxay samayn kartaa isbeddellada isbeddelka iyadoo la isticmaalayo habka ugu hooseeya. Waxaad sidoo kale ku shaqeyn kartaa moodooyinka dhulka (DTM iyo TIN), oo ay ka mid tahay natiijooyinka uu muujinayo, sida curiska heerka, profiles, xisaabinta mugga iyo qaybaha kala duwan (ma aha qaabaynta). Sida qalab CAD uu leeyahay wax walba oo aad u baahan tahay ayaa laga yaabaa, iyada oo amarradiisa dhismaha saxda ah, tixraac wici kartaa ama qaabab caadi dejinta sida billabo, DXF, DGN, LandXML iyo files qaab. Si kastaba ha noqotee, qaabka ugu sarreeya, waxay ku shaqeyn kartaa sifooyin badan oo ku jira khariidada isla, oo la mid ah xfm ee Bentley Map. Sidoo kale moduleka aasaasiga ah waxaa ka mid ah akhristaha qaababka (waraaqaha) iyo akhristaha sifooyinka xogta ama metadatos of Chaos Desktop.
Laga bilaabo macaamiilka Database: GIS / Khariidadaha. Waxaa dhacaya in format sare ma aha CAD fudud u yeelaa, laakiin dukaamada schema XML ay macluumaad in ka dibna loo soo diri karaa MXD ArcGIS ah, jeestay miisaskii iyo sifooyinkii sida ay doonayeen in Topocad. Waxa kale oo aad la macaamili kartaa macluumaadka macluumaadka iyadoo loo marayo ArcSDE.
Waxaad u dhoofin kartaa qaababka caadiga ah sida kml, Mapinfo ama xogta xogta. Recently isku xira FDO ah si ay ula falgalaan xogta ee heerarka furan sida MySQL, PostGIS, Oracle, MS SQL Server astaanta, SQLite, ESRI ArcSDE, SDF (Autodesk MapGuide), ESRI SHP, ODBC, WFS, WMS, GDAL (Data Geospatial bilaabay sidaynu Library) (Raster), OGR (format dulinka: SHP, gml, DGN, KML, mapinfo iwm).
Laga soo bilaabo macaamiisha ilaa Qorshaha: Qorshooyinka / Khariidadaha. Waxay leedahay awood weyn oo ay ku abuurto laybarasho, loo yaqaan calaamad, oo leh miisaska xogta laga soo saaray sifooyinka. walxaha dulinka, khadadka iyo tirooyin xubno firfircoon, oo hawlaha la samayn karaa ka khariidad, tusaale ahaan labadaba, tirada qoraalka ee model ah waxbaa laga beddeli karaa ka khariidad oo aan wax badan ka dib. Taageerada shaqada nooc ka mid ah sawirada, sidii loo sii deyn lahaa dhadhanka farshaxanka ee badeecada kama dambaysta ah.
Laga soo bilaabo miiska illaa Design: Engineering. Waxaa ka mid ah awoodaha jimicsiga jidka jimicsiga, sida madaniga 3D ama tartan kasta. Waxa kale oo ay leedahay wax loogu talagalay naqshadeynta jidka tareenada, tunnelka, tuubooyinka, kanalka iyo dykes.
Habka xogta loo maareynayo, tusaale ahaan qaybaha kala duwan ee loo yaqaan 'cross' waa ka dhaqso badan kuwa caadiga ah, waxaa jira isdhexgalka labada isku-dabiiciga ah ee warshadaha iyo profile-ka.
Laga soo bilaabo Design to Field: Mawduuca / Muuqaalka. Xogta naqshadeynta waxaa loo dhoofin karaa feylasha in xarumaha guud ama GPS ay isticmaali karaan si ay u shaqeeyaan. Muhiim ma aha in marka la soo dhoofiyo xogta loo beddelay UTM, ka dibna waxaa loo dhoofin karaa sida isku-duwayaasha caadiga ah si looga fogaado waxyeellada goobaha la saadaaliyo. Ka dibna wareeggaasi waa la celin karaa markale.
Guud ahaan, waxay u muuqataa qalab xiiso leh. CAD oo leh awood waxqabad leh, naqshadeynta iyo isdhexgalka farshaxanka. Qiimaha aasaasiga ahi wuxuu u dhexeeyaa $ 1,500, taas oo ku xidhan waxa lagu daray.
Halkan ayaad soo dejisan kartaa qaybta tijaabada ee TopoCAD
Post Previous«Previous Rootiyayaashu waxay u yimaadeen inay joogaan
Post Next Qiyaasta Isbarbardhiga 60 Wadarta GoobtaNext »
10 Jawaab "TopoCAD, in ka badan Topo, in ka badan CAD"
Haa, waa barnaamij aad u wanaagsan.
Waa wax laga xumaado in aysan Mareykanka ka jirin wax qaybiyayaal. Yurub iyo Bariga Dhexe waa meesha si wanaagsan loogu meeleeyay, sida ku xusan bogga qaybiyayaashu.
xawaarihiisii isagu wuxuu leeyahay:
Aad bay u xiiso badan tahay codsigeeda xagga injineernimada, waxaan jeclaan lahaa inaan wax ka barto barnaamijkan laakiin Peru gudaheeda kama sheegaan barnaamijkan maadama aan ka heli karo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan arrintan
Turjumaadda iyo Dejinta isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan ahay Geogafo, waxaan ku bari, aan qalin 1981 iyo intii aan waxbarasho, barnaamijyadan ma jirin sida aad u faa'iido badan maanta.
Waxaan jeclaan lahaa in ay helaan barnaamijkan, iyadoo dhammaan codsiyada ay, iyada oo aan xayiraado, si ay u bartaan faa'iidooyinka ay, codsiyada, iwm, iyo in la isbarbardhigo la barnaamijyada kale ee la mid ah. Sidaa awgeed, siinta xubnaha koorsada, aragti ah in la dhexgeliyo qalabkan, oo gacan ka geysta barista wanaagsan iyo isticmaalka wanaagsan ee waqtiga tacliinta.
Waad ku mahadsantahay hormarinta raaxada iyo iskaashiga aad siin karto isgaarsiinta.
Qaabka aan isticmaalayo waa Topocad 7.2.1
Waa barnaamij fiican oo aan isticmaalay, waxa uu leeyahay faa'iidooyin badan
haddii qof uu jeclaan lahaa inuu is weydaarsado i sii ogeysii waan ogaan doonaa
si fiican u ogaato in ka badan hal ...
Intaa waxaa dheer, dhammaantood waa bullshit
Waxaan aaminsanahay in Portugal aan lahayn wakiil, laakiin boggan waxaad ku arki kartaa kuwa kale ee wadamada yurub ah, haddii aad waxtar leedahay waxaad la xiriiri kartaa iyaga
Hada, Waxaan xiiseynayaa inaan iibsado software halkaas oo aan ka iibsan karo Portugal?
Waxaad ka heli kartaa TopoCAD emailkan
Leonardo camilo serrano isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan, aad ayaan ugu xiiso iibsiga software ah in ay ka shaqeeyaan in sahan iyo injineernimada sokeeye, oo awood u leh guud ahaan Muga, qaybaha cross, design ee waddooyinka iyo dhagaxyadii qorqornaa ahay, la Eagle Point share mugga shaqeeya isku halaynta iyo jinsiga contours ee Civilcad ay xawaaraha, in la dhowr Software ka shaqeeya si ay u horumariyaan shaqo, laakiin waxaan jeclahay in aan la mid i siinaysaa kalsooni iyo awood kar in aan shaqada ka shaqeeyaan, waxaan doonayaa in aan ogaado sida qiimaha iibka iyo mahad inaad fiiro